သိမ်ဆောက်လုပ်မှူ အတွက် အလှူငွေ လိုအပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သိမ်ဆောက်လုပ်မှူ အတွက် အလှူငွေ လိုအပ်
သိမ်ဆောက်လုပ်မှူ အတွက် အလှူငွေ လိုအပ်
Posted by etone on Aug 30, 2011 in Buddhism, My Dear Diary | 19 comments
သိမ် လုပ်ငန်းခွင် တစ်နေရာ
သိမ်တည်ဆောက်နေမှူ (ရှေ့တည့်တည့်မှ မြင်ကွင်း)
အကျော်ဆရာတော်ကျောင်းပေါ်ကနေ သိမ် လုပ်ငန်းခွင်ဘက်ကို ရိုက်ထားတာပါ ။
သိမ်အလှူသတင်းပေးသူ ဆရာတော် ဦးဇ၀န(၀ဲ) နှင့် ဦးစီးဆောင်ရွက်သူ ဆရာတော် ဦးရေ၀တ (ယာ)
အကျော်ဆရာတော်ရဲ့ ငွေစာရင်း ဖိုင်တွဲတွေ စီထားတဲ့ နေရာလေးပါ... ။ ငွေဝင် ၊ထွက်လည်း သေချာ မှတ်တမ်းလုပ်ထားခဲ့ပါတယ် ...။
ကန်တော့ပွဲဖိုး ၊ အကျွေးမွေးဖိုးကအစ ဒီလိုစာအုပ်လေးတွေနဲ့ သေချာမှတ်ထားပါတယ်တဲ့ .. ။
အကျော်ဆရာတော်ပုံပါ ... ဆက်သွယ်လှူဒါန်းချင်လျှင်တော့ ဖုန်း -095156949 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ။
သိမ်တည်ဆောက်မှူအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေပါ ... သဒ္ဓါတပ်အားသရွှေ့ ပါဝင်နိုင်ပါတယ် ။
အသီးမှာ သရက် ၊ အရွက်မှာ လ္ဘက်၊ အလှူမှာ ကထိန် ၊ ကျောင်းမှာ သိမ်ရယ် လို့ … ရှေးစာဆိုတွေ ပြောစမှတ်ပြုတာနဲ့ အညီ … အကျိုးကြောင်း ညီညွတ်စွာဖြင့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ သိမ်အလှူလေး တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် … ။ အလှူဖြစ်ရန် နိဗ္ဗာန်ဆော်ကတော့ …ဆရာတော် ဦးဇ၀နပါပဲ … ။လှိုင်သာယာ ပညာရံသီကျောင်းကပါ … ။
ကျွန်မတို့ ဆေးခန်းဖွင့်သည့်နေမှ … ယနေ့တိုင် ဘုန်းကြီး ၊ သီလရှင်များကို အခမဲ့ ဆေးဝါးထောက်ပံ့ခြင်း ၊ အခမဲ့ ဆေးကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သဖြင့် … ဆရာတော်များ မကြာခဏဆိုသလို ကြွကာ ကုသမှူခံယူကြပါတယ် …ဆရာတော် ဦးဇ၀နလည်း မကြာခဏဆိုသလို ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ လာရောက်ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ကုသရာ ….မျက်မှန်းတမ်းရင်းနှီးနေမိပါတယ် … ။ တစ်နေ့ ဆရာတော်က ၄င်းဧ။် ကျောင်းအနီးတွင် စုပေါင်းသိမ် ဆောက်လုပ်မည့်ဟု ကြားကြောင်း ပြောရာ … ပါဝင်လှူဒါန်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် …။ သိမ် အမှန်တကယ်ဆောက်ဖြစ်လျှင် ကြွရောက် အလှူခံပါလုိ့ လျှောက်တင်ထားပြီး မေ့မေ့လျှော့လျှော့ နေခဲ့ကြမိတယ် … ။ နောက်တစ်လခွဲလောက် အကြာမှာတော့… ဆရာတော် ပြန်ရောက်လာကာ …. သိမ်အလှူအတွက် သိန်း (၅၀) မတည် အလှူရှင်ရှိသဖြင့် … အုတ်မြစ်စီတော့မည့် အကြောင်း အလှူခံ လက်ကမ်းစာဆောင်လေး ပေးပြီး လာပြောပါတယ် … ။ ကျောင်းအားလုံးနှင့်ဆိုင်သော သိမ်ဖြစ်သဖြင့် …. စာရင်းအင်း နိုင်နင်းသော အကျော်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရေ၀တ က ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသည်ဟုလည်း သတင်းပေးခဲ့ရာ … ကျွန်မတို့လည်း အကျော်ဆရာတော်နှင့်ပင် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လှူဒါန်းလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် … ။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ 27 ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ သိမ်တည်ဆောက်ရာနေရာသို့ ဆရာတော် ဦးဇ၀န အကူညီဖြင့် သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ် ….။ အကျော်ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး … စေတနာသဒ္ဓါစိတ်များဖြစ်လာကာ အိပ်ထဲပါလာတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီး ၁၂ပေ x ၁၀ပေ အခန်းတစ်ခန်းအတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်းလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် … ။ ဆရာတော်ဧ။်ပြောပြချက်အရ … သိမ်တည်ဆောက်မှူ ၄၀% သာ ပြီးစီးသေးသဖြင့် …. အလှူရှင်များ ထပ်မံလိုအပ်နေကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ် … ။ ရွာသူ ရွာသားများထဲမှ သိမ်တည်ဆောက်မှူအတွက် သဒ္ဓါတရား တပ်အားသရွှေ့ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူ ကြပါရန် နှိုးဆော် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် … ။
သိမ်တည်ဆောက်မှူမှာ ခန့်မှန်းခြေ သိန်း လေးရာ့ငါးဆယ်ခန့် ကုန်မည်ဟု သိရပြီး … ၄၀%သာ တည်ဆောက်ပြီးစီးသေးသည် … ။ အမြင့် ၂၅ပေရှိပြီး အကျယ် ၇၀ x ၄၀ ပေ ရှိသော ဤသိမ်တော်ကြီးကို ရှေးယခင်ဆရာတော်များ လက်ထက် ၁၉၅၁ လောက်ကတည်းက ဆောက်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း .. အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ ။ ယခုအကြိမ်တွင်တော့ မတည် အလှူရှင်အပါဝင် ပံ့ပိုး အလှူရှင် များဖြင့် ပြီးစီအောင် ဆောက်လုပ်နိုင်မည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်တဲ့လေ … ။
စာပေနှံ့စပ်တဲ့ အကျော်ဆရာတော်ဆီက သစ်တွက်နည်းလင်္ကာလေးကိုလည်း မှတ်ယူခဲ့ပါသေးတယ် … (ကြုံတုန်းလေး အမြတ်ထုတ်လာတာ.. အဲ .. မှတ်လာတာပါ )
(((ခုနှစ်ထောင့်နှစ်ရာ ထိုသချာင်္ မှန်စွာ တည်ကိန်းပြု ၊ လိုသည့် သစ် ပျဉ် လက်မှယှဉ် ၊ ဗျက်တွင် ဒုပွား ယင်းနှင့်စား ၊ လာဘ်ကား ပေပေါင်းရှူ ..။ ))) တဲ့လေ …
Call U Tay Za
အလှူတန်းဆို အတော်ဝါသနာပါကြတယ် ထင်ပါ့ … ငြိမ်ချက်သားကောင်းလို့ ၀င်တောင် မမန်းဘူး
မနေ့ က မှ မန်းတလေး ကို ပြန်ရောက်တယ်
မနေ့ ည က ရွာထဲ ဝင် ပို့ စ်တင်နေလို့ 
အခု ဖတ်ကြည့်ဖြစ်တယ် အမ ရေ
ဘုန်းတော်ကြီး သိမ် အတွက် မလှူနိုင်သေးပေမယ့်
အမတော် ကို တော့ ၃ ကျပ် ပေးခဲ့ပါတယ် ဗျို့ 
ဟုတ်တယ်နော် တစ်ယောက်မှကိုဝင်မပါကြသေးဘူး။ဟွန့် တွန့် တိုလိုက်ကြတာ။
သြော်………. ညီမလေး etone က ဆရာဝန်လား… ထီထိုးထားတယ် လှူဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။
etone ရေ လှုတာကတော့လှုချင်တယ်
စုံစုံရေ … တတ်နိုင်သလောက်လှူလည်း ရပါတယ် … ဆရာတော်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ချိတ်ဆက်လှူလိုက်ပါ … ။ ကိုယ်တွေလည်း သွားတုန်းက အများကြီးလှူမယ် မရည်ရွယ်ထားဘူး … လုပ်ငန်းခွင်သွားကြည့်ပြီးမှ လှူချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ … အိတ်သွန်ဖာမှောက် ပါသလောက် လှူဖြစ်သွားတယ် … ။ လှိုင်သာယာဆိုပေမဲ့ မဝေးဘူးလေ… အင်းစိန်ပေါက်တောဝဘက်က အောင်ဇေယျတံတား အဆင်း နောက်တမှတ်တိုင်ဆို ရောက်ပြီ … ။
သိမ်ကျောင်းဆောက်ရာ သဒ္ဓါပေါက် ““စလုံး”” မြန်မြန်ရောက်ပါစေ
ငွေလိုချိန်မှာ အပူမရှာ စပွန်ဆာကောင်းကောင်း ရပါစေ…
သွားလေရာတွင် ချက်တင်ဝင် ကွန်နက်ရှင်လဲ ကောင်းပါစေ..
၀င်ချက်ရင်လဲ စဉ်အမြဲ ဘဲဘဲ တွေလဲရပါစေ..
လှူတဲ့သူတွေ ချမ်းသာ ထီပေါက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေ…
ကျောင်းမှာ သိမ် လို့ အဆိုရှိပါတယ်ခင်ဗျား..
အမွန်မြတ်ဆုံး ကုသိုလ် ယူနှိုင်ကြပါစေ…
တစ်ချို့ အလှူရှင်တွေက အစွဲရှိကြတယ်..
ဆရာတော်နဲ့သိပ်မရင်နီး.အသိအကျွမ်း ဘုန်းကြီးမရှိပဲ လှူတယ်ဆိုတာ ရှားသကွဲ့ 
ရွာသူဋ္ဌေးတွေ တွေ့ မိရင် လှူကြပါလိမ့်မယ်..နော့
သိမ်ကိစ္စကို သိမ်ငယ်မိလို့ ၀င်မမန့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် …
လှူချင်စိတ်ရှိပြီး မလှူနိုင်သေးတော့ …
ရှိလို့လှူ လှူလို့ပိုရှိနိုင်ကြပါစေ၊ ဦးကြောင်ကြီး မေတ္တာဝေသည်။
အီတုံးရေ- ရွာထဲ မရောက်ဖြစ်တာနဲ့ စာတွေလည်း ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ လှူချင်တာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်နားမှာလည်း ပြည့်အောင်မဖြည့်နိုင်သေးတော့ အဲဒါကိုပဲ မနည်းကြိုးစားနေရတယ်။ နောက်ပြီး အများစုပေါင်းလှူတော့လည်း ဘာသာခြားတွေပါတော့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုပဲ လှူဖြစ်တာမို့ပါ။
ဒီလို အလှူ အကောင်းစားကြီးကို ငါတို့နဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူးကွယ်……… ရွာထဲက အကြီးအကဲ တွေနဲ့သာ ထိုက်တန်တဲ့ အလှူမျိုးပါ…။ ရွာထဲမှာက မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ အစဉ်အလာအတိုင်း ဘုရားဒယကာ ကျောင်းဒယကာ ဖြစ်ချင်နေတဲ့ လူတွေရှိမှာပါ…။ နော်………. သူတို့က သူတို့ အလှူ ကဗျည်း တင်ရေးပေးမယ်ဆိုရင် လှူကြမှာပါ…။
အဝေးမှ ပေးပို့လှူတန်းမယ်ဆိုရင် အိတုံကတာဝန်ယူလက်ခံပြီး လှူတန်းပေးမှာလား…ဒါမှမဟုတ် ဆရာတော်ဆီကိုပဲ တိုက်၇ိုက်လှူတန်းရမှာလား သိချင်ပါတယ်…
အဝေးကလူတွေ ဆရာတော်ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်သလို ၊ ဆရာတော်ကို ဆက်သွယ်ရန် အခက်ခဲရှိတဲ့အခါ … etone က ကြားဝင် တာဝန်ယူ တဆင့်လက်ခံ လူဒါန်းပေးပ့ါမယ် …. ။ လှူဒါန်းမှူ အထောက်ထား အပြည့်စုံကိုပါ တာဝန်ယူပေးပါမယ် ။
အထောက်အထားတွေက အဓိကမဟုတ်ပါ။အိတုံး တာဝန်ယူလှူတန်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆို ပေးပိုရမဲ့လိပ်စာ…ရယူလိုပါတယ်…တိုက်ဆိုင်သော အလှူတစ်ခုလို့ ယူဆပါတယ်…လာမယ် ၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျနော်ရဲ့ မွေးနဲ့ကြုံနေလိုပါပဲ….
လိပ်စာကို ဒီမှာမဖေါ်ပြချင်ရင်တော့ ကျနော့ မေးလ်ထဲကို ရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုမှပဲ ဖတ်ဖြစ်လိုပါ etone ရေ
အများကြီး မလှူနိုင်ပင်မယ့် တက်နိုင်သလောက်လေးတော့ လှူချင်ပါတယ် ……